Maraykanka Oo Fariin Hanjabaad Ah U Diray Al-Shabaab - FOOLAAD MEDIA
Home » Wararka » Maraykanka Oo Fariin Hanjabaad Ah U Diray Al-Shabaab
Maraykanka Oo Fariin Hanjabaad Ah U Diray Al-Shabaab
War Qoraal ah oo kasoo baxay Taliska Howl-galka Mareykanka ee Qaaradda Afrika [AFRICOM]. ayaa waxaa si kulul loogu cambaareeyay weerarkii shalay ka dhacay agagaarka Madaxtooyadda Soomaaliya.
Waxaa lagu sheegay War-saxaafadeedka in Mareykanku ka tacsiyadeynayo Shacabka iyo dowladda Soomaaliya dadkii ku dhintay, isla markaana soo kabasho deg deg ah u rajeynayo kuwa dhaawaca ah.
“Mareykanku wuxuu si xooggan u cambaareeynayaa falkii argigixisimadda ahaa ee Sabtidii [14-ka July] ka dhacay Muqdisho, kaasoo qeyb ka ah falalka guracan ee kooxda Al-Shabaab,” ayaa lagu yidhi bayaanka AFRICOM.
Mareykanku wuxuu u balanqaaday dowladda Federaalka Soomaaliya inuu ka taageeri doono la dagaallanka waxa uu ugu yeedho “Argigixisadda” isla maarkaana ay mar walba la garab-taagan yihiin kaalmo dhinac walba ah.
“Mareykanka oo kaashanaya ciidamadda Soomaalida waxay jawaab cad ay ka bixin doonaan weerarkan, inagoo Jug culus gaadhsiin doona kooxda cadowg ah,” ayuu hogaanka AFRICOM ku yidhi qoraalkan uu soo saaray.
Weerarkii Sabtidii oo shalay ahayd ayaa ku bilowday qaraxyo culus, waxaana xigay iska hor-imaad toos ah, waxaana la sheegay inay ku dhinteen ugu yaraan 10 qof, waxaana ku dhaawacmay tiro intaasi ka badan.
Xaralad Al-Shabaab oo sheegatay mas’uuliyadda weerarka, ayaa daboolka ka qaaday inay beegsatay Hotel SYL iyo Kontaroolo laga galo xarunta Villa Soomaaliya, ayna iyagoo nool goobtii dagaalka dib uga laabteen qaar ka mida raggii fuliyay howlgalkan.
Weeraradan ayaa waxay dhacayaan iyadoo dowladdu si wayn u adkeysay amaanka caasimadda, islamarkaana inta badan Isgoysyadda ay ku sugan yihiin ciidamo aad u fara badan, taasoo su’aalo culus dadku iska weydiinayaan.